Spain Archive - Gool FM - page 4	twitter
(Dimishiq) 15 Mar 2017. (Catalonia) 15 Feb 2017. Dalka Suuriya ayaa waxaa ka socda dagaalo daba dheeraaday oo sii socda lix sanadood kuwaa oo galaaftay dad iyo duunyaba.
Xiddiga kooxda Barcelona Lionel Messi ayaa muujiyay sida uu uga xun yahay dhibaatada ka taagan dalkaasi iyo caruurta halkaa ku li’aneysa.
Kabtanka xulka Argentina ayaa isticmaalay boggiisa Facebook si uu sare ugu qaado lacago ururuinta wacyi galinta mashruuca bani’aadannimo ee UNICEF.
“Dagaal maalin kasta ah waa wax aad u badan.
“Ciyaalka Suuriya waxa la baday xasarado iyo 
Labo sano uu xilka halkaa ka hayay kaddib waxaa loo gacan galiyay shaqada sare ee stadio Santiago Bernabeu kaddib 
Real Madrid oo ka walwalsan qaab ciyaareedka liita ee Keylor Navas
(Madrid) 15 Maarso 2017 Kooxda boqortooyada Spain ee Real Madrid ayaa ka walwalsan qaab ciyaareedka liita ee xiliciyaareed kan uu soo bandhigayo goolhaye Keylor Navas.
Sida ay baahisay Marca, maamulka Real Madrid ayaan la dhacsanayn qaab ciyaareedka Keylor Navas ee xiliciyaareed kan kaas oo marar badan halis galiyay kooxda.
Goolhayahaan ayaa halyeey u ahaa taageerayaasha Real Madrid xiliciyaareedkii hore markaas oo uu badbaadiyay gool kulaad badan laakiin haatan wuxuu orin iyo foori kala kulmaa taageerayaasha.
Wargayska ayaa intaa ku daray in Keylor Navas uu ka siibaxayo albaabka 
Barcelona oo ku fikiraysa inay dib u soo ceshato Thiago Alcantara
(Barcelona) 15 Maarso 2017 Kooxda Barcelona ayaa ku fikiraysa inay dib u soo ceshato laacibkeedii hore ee Thiago Alcantara kaas oo haatan waayo fiican ku qaadanaya kooxda Bayern Munich.
Agaasimaha dhanka ciyaaraha ee kooxda Barcelona ayaa sifiican ula socday xaalada Bellerin iyo Thiago Alcantara sida ay baahisay Mundo Deportivo.
Wuxuuna daawaday kulankii ka dhacay jarmalka ee Bayern Munich ay 5-1 uga adkaatay kooxda Arsenal, markaas oo Thiago Alcantara uu 2-gool ka dhaliyay kooxda reer ingiriis.
Dhanka kale idaacada Cadena Ser ayaa xaqiijisay in Barcelona ay qaaday tilaabadii 
“Wiilkeyga ma jecla kubbada cagta, wuxuu Barcelona u daawadaa wiilka Suarez dartii.”. Lionel Messi
(Catalonia) 15 Mar 2017. Wiilka Messi ayaa u muuqda inuusan raaci doonin dhabaha aabihii, kaddib markii la sheegay inuusan jeclayn kubbada cagta.
Aabe kasta ayaa jecel in caruurtooda ay qaadaan wadadooda, laakiin waxay iminka u muuqataa in jaceylka uu Messi u qabo kubbada aysan gaarin wiilkiisa.
Thiago Messi ee ah curudka laacibka ugu fiican aduunka ayaa la sheegayaa inuu Camp Nou u aado oo kaliya si uu waqti ula qaato Benjamin oo ah canuga Luis Suarez.
“Dhabtii in badan ma jecla kubbada cagta,” 
SHEEKO CUSUB: Neymar iyo Messi oo arrinkaan isku khilaafay
(Catalonia) 14 Mar 2017. Wiilasha hormuudka u ah kooxda Barcelona ee Lionel Messi iyo Neymar ayaa la warinayaa inay isku khilaafeen arrinka ku aadan saxiixa xiddiga kooxda Liverpool ee Philippe Coutinho.
Neymar ayaa la sheegay inuu kooxda Barcelona waydiistay inay xagaagan la soo wareegaan xiddiga kala tirsan xulka Brazil ee Coutinho.
Kubbad qaabeeyaha Liverpool ayaa si joogta ah lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Nou Camp kaddib shakiga mustaqbalka Andres Iniesta.
Inkastuu Coutinho heshiis cusub u saxiixay Reds bishii Janaayo misane waxay weli u 
Gerard Pique oo aan waxba ka soo qaadin guul daradii ka soo gaartay Deportivo
(Barcelona) 13 Maarso 2017 Daafaca kooxda Barcelona ee Gerard Pique ayaa soo dhaweeyay guul daradii xalay kooxdiisa ka soo gaartay kooxda Deportivo oo ay marti u ahaayeen.
Barcelona ayaa loogu awood sheegtay 2-1, xili ay maanka ku haayeen guushii waynayd ee ay arbacadii hore ka gaareen kooxda PSG.
Gerard Pique ayaa sheegay in kooxdiisu ay saxiixi lahayd inay ka soo gudubto PSG isla markaana ay guul daro ka soo gaarto kooxda Deportivo sidaas oo haatan ay wax u dheceen.
“Dhabtii Deportivo aad ayeey u fiicnayd, 
Cristiano Ronaldo oo labo RIKOODH ku sameeyey goolkii uu xalay ka dhaliyey kooxda Real Betis
(Madrid) 13 Maajo 2017 – Weeraryahanka kooxda Real Madrid ee Cristiano Ronaldo ayaa xalay sameeyey labo rikoodh oo waa wayn kulankii horyaalka La Ligaha Spain ee ay kooxdiisu guul soo laabasho 2-1 ah ka gaareen Real Betis.
Ronaldo ayaa xalay Madax ugu dhaliyey kooxdiisa Rdeal Madrid goolka barbaraha ka hor inta uusan kabtan Ramos goolka guusha ku hoggaamin cad-cadka.
Haddaba Ronaldo ayaa goolkaas ku sameeyey labo rikoodh waxaana CR7 uu xalay barbareeyey xiddiga taariikhda ugu goolasha badanaa horyaallada waa way nee Yurub, 